မင်းဘလော့ဂ်တွေကိုစူးစိုက်ခဲ့လား | Martech Zone
သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
Blogging ၏အစောပိုင်းကာလများ၌ပြန်လှည့်ပတ်သွားသောအခါ၊ အခြားဘလော့ဂ်များကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုငယ်ရွယ်သည့်အချိန်များ၌တိုးတက်မှုအများစုသည်အခြားဘလော့ဂ်များတွင်ကျွန်ုပ်၏စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏တသမတ်တည်းတိုးတက်မှုနှင့်အတူတောင်မှကျွန်ုပ်သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောနယ်ပယ်များတွင်အကြောင်းအရာများစွာရေးသားသောဘလော့ဂ်အသစ်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။ ငါသည်လည်းငါ၏နေ့စဉ်လင့်များအတွက်သူတို့ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဘလော့ဂ်ပေါင်းသန်းတစ်ရာထွက်ရှိလာသောအခါတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပြောဆိုမှုများများစွာရှိသည်။
Blog Seeding ဆိုတာဘာလဲ။
Google နှင့် Technorati ငါအရင်ကတစ်ခါမှမဖူးခဲ့ဖူးတဲ့ဘလော့ဂ်များကိုရှာဖွေခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၅ မိနစ်သို့မဟုတ် ၁၀ မိနစ်ခန့်သင်သုံးစွဲနိုင်သည် ဘလော့ဂ် နှင့်စာဖတ်သူအသစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထိတွေ့ရ။ Blog Seeding သည်အခြားဘလော့ဂ်တစ်ခု၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်၏မှတ်ချက်အချက်အလက်တွင်သင်၏ဘလော့ဂ်တွင်အကောင်းဖက်သို့ပြန်သွားရန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ link တစ်ခုလွှင့်ဖို့ရုံမှတ်ချက်ပေးမထားပါနဲ့ - ဒါက spamming ပါပဲ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိတ္တူအချို့ကိုရေးပါ၊ ဘလော့ဂါကိုချီးမွမ်းပါ၊ သို့မဟုတ်သင်နှင့်သဘောမတူပါကအထောက်အထားအချို့ပေးပါ။ သင်၏မှတ်ချက်များလေလေသင်ပိုမိုအာရုံစိုက်လေလေဖြစ်သည်။
Blog Seeding သည် Comment Spamming နှင့်ကွဲပြားသည်
Blog Seeding အတွက်လှုံ့ဆော်မှုသည် Comment Spamming နှင့်ကွဲပြားသည်။ ထင်မြင်ချက် Spamming သည်အနက်ရောင် ဦး ထုပ်တစ်ခုဖြစ်သည် SEM အသုံးမပြုသောဘလော့ဂ်များကိုရှာဖွေရန်နည်းလမ်း nofollow နှင့်မှတဆင့်အဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရ website ရဲ့ backlink.
မေးခွန်းတစ်ခုအတွက်ဘလော့ဂ်၏စကားပြောဆိုမှုမှထည့်သည်။ သင်ပိုဆွေမျိုးပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာနှင့်စာမူကိုထောက်ပံ့နေသည်သို့မဟုတ်ထိုတွင်ရှိသောအကြောင်းအရာကိုငြင်းဆိုနိုင်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်းကပါပဲ အသုံးပြုသူထုတ်ပေးအကြောင်းအရာ မည်သည့်ဘလော့ဂါတန်ဖိုးထားသင့်ကြောင်း။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင့်အား blogger ၏ပရိသတ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ လူဘယ်နှစ်ယောက်ဘလော့ဂ်များကိုဖတ်ပြီးမှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုသည်ကိုလျှော့မတွက်ပါနှင့်။
ပေါင်း ဘလော့ဂ် သင့်ဘလော့ဂ်၊ ထုတ်ကုန်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏အသိပညာကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်များကိုသင့်အိတ်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ဒါဟာအတော်လေးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်!
27:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 11, 34 မှာ
ဒေါက်ဂလပ် post ကိုအလွန်မြတ်သော။ ငါဒီနည်းစနစ်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးပြီးကျရှုံးခဲ့တယ်။ စကားပြောခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောကြော်ငြာများမပြုလုပ်ပါကသင်၏ထင်မြင်ချက်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုချခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်အမှန်တကယ်ပင်စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တကယ်လို့စကားပြောတာကိုတကယ်ပြောတာက“ ငါလည်းပဲ” မှတ်ချက်ပေးမယ့်အစား visitors ည့်သည်တွေဟာမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုသဘာဝကျကျဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်။
nofollow ဘလော့ဂ်များသွားတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့များအားလုံးသည် nofollow မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းတို့သည် spamers အမြောက်အမြားကိုဆွဲဆောင်ပါသည်။ သို့သော်အော်ဂဲနစ်ကြီးထွားမှုကိုတည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားသူများအတွက် nofollow ဘလော့ဂ်များကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များတွင် nofollow link မရှိသောအဆင့်နိမ့်အဆင့်ကိုရရှိရန်မှာအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ မှတ်ချက်ပေးခြင်းသည်စစ်မှန်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည့်နေရာတွင်၎င်းသည်သူတည်ဆောက်သောဆက်ဆံရေးနှင့်၎င်းကိုဖန်တီးသည့်သဘာဝဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သူတို့၏မှတ်ချက်များကိုလင့်ခ်များနှင့်အဆက်မပြတ် spam မပြုလုပ်ပါကအခြားသူများကသင်၏တင်ထားသောစာမူများကိုစနစ်တကျချိတ်ဆက်ရန်ပိုမြန်လိမ့်မည်။
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! သင့်မှာစာဖတ်သူအသစ်ရှိတယ်။ 😉
28:2008 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 24 မှာ
အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြားဘလော့ဂ်များတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ post ကိုငါ့ကိုဖြောင့်စေတော်မူ၏။
nofollow blog ဆိုတာဘာလဲ။ ငါရှိရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
6:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 28
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug ။ ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်ဖောက်သည်များအားဘလော့ဂ်မျိုးစေ့များခွဲခြင်းနှင့် spam များကိုခွဲခြားရန်ကြိုးစားရာတွင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဘလော့ဂ်တချို့ကိုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မှတ်ချက်ပေးဖို့လည်းသူကလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ 🙂
22:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 12, 32 မှာ
ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါ Technorati ကိုတောင်မဝင်ရသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကနောက်တစ်ခုပါ။
သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာသည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက် (သို့) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဘလော့ဂ်များအတွက်ကောင်းသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်များအတွက်၊ တူညီသောနည်းသည်မထိရောက်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်များကိုစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
22:2011 pm တွင်စက်တင်ဘာ 1, 20 မှာ
အကယ်၍ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်တစ်ခုသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတ်မှတ်ထားပါကမှတ်ချက်များသည်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ သို့သော်ဘလော့ဂ်တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်အပြင်ဘက်ရှိရည်ရွယ်ချက်ရှိလျှင်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။
https://blog.facebook.com/ - သောင်းနှင့်ချီသောမှတ်ချက်များကိုရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လူမှုရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သည်။ သူတို့၌ဖောက်သည်သန်းပေါင်းများစွာရှိသောကြောင့်ချွင်းချက်ဖြစ်လိမ့်မည်
http://www.lulu.com/blog/ - အကြောင်းအရာမှန်ကန်သောအခါဒီမှာလှုပ်ရှားမှုအတော်များများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
စက်တင်ဘာ 23, 2011 မှာ 5: 01 AM
ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်တွေအတွက်၊ သင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဘလော့ဂ်ဟာပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့အာရုံစိုက်မှုရှိသင့်ပြီးကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအကန့်အသတ်မဲ့သာထားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်အတွက်အရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးနေပြီး၎င်းသည်လာရောက်လည်ပတ်သူများအနေဖြင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သော်လည်းအသုံးပြုသူ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်မပါဝင်ပါ။
7:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 01
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! ဒါကငါတို့ဘလော့ဂါတွေအတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့အတွေးပဲ။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုဝါသနာအဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ယခုငါ Blogspot ပိတ်ပြီးကတည်းကနောက်လိုက်များရရှိရန်စတင်တာပါ။ ငါမှတ်ချက်များရေးသားခဲ့ကြပေမယ့်ငါငါ့ဘလော့ဂ် link ကိုမပါဝင်ပါ။
11:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 56
သို့သော်မှတ်ချက်ရေးထားသည်မှတ်ချက်ရေးပါ၊ ဘလော့ရေးခြင်းအတွက်အခြားဘာကိုသင်အကြံပြုမလဲ။ Pinterest လိုကိရိယာမျိုးကိုသင်အသုံးပြုပါသလား။ Reddit သို့မဟုတ် Digg?